Salaamanews » 2013 » February » 09
Home » WFP “Soomaaliya waxaanu uga baqeynaa macluul kale”
(Salaamanews)-Hay’adda WFP ee Qaramada Midoobay u qaabilsan cunada ayaa sheegtay in dad gaaraya 1.6 Milyan ruux oo ku nool gudaha Soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar aadanimo.
Elizabeth Byrs oo u hadashay hay’adda WFP ayaa sheegtay in dadka baahida u qaba cuntada ay intooda badan ku nool yihiin deegaanada dhowaan laga saaray Alshabaab ee gobollada koonfurta Soomaaliya.
WFP ayaa codsatay lacag... Tags: warar Kenya to reduce troops in Somalia
(Salaamanews)- Kenya will reduce its troop presence in Somalia by about 20 per cent in the coming weeks, according to a report to the United Nations (UN) Security Council.
A battalion of 850 Sierra Leone troops is scheduled to be added to the African Union Mission in Somalia (Amisom) in February and March, with Kenya reducing its deployment by one battalion, the report says.
Kenya had a total of 4,652... Tags: news Xukuumadda Soomaaliya oo sharci u dajineysa isgaarsiinta iyo warbaahinta dalka
(Salaamanews)-Xeerka isgaarsiinta iyo warbaahinta ayaa looga gol leeyahay sidii shuruuc loogu sameyn lahaa isgaarsiinta ka howlgasha dadka gudihiisa sida shirkadaha taleefoonnada, adeegyada Internet-ka iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan oo muddo ka badan 22 sano aan lahayn shuruuc cayimeysa xuquuqda shaqo iyo qaabkii dowladda ay u canshuuri lahayd, wasiirka warfaafinta ayaa sheegay.
Cabdullaahi... Tags: warar Guuleed “Waa qasab isbadal lagu sameeyo maamulladii hore”
(Salaamanews)-Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed oo booqasho saddex cisho ku tagay magaalada Beledweyn ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in is bedel lagu sameeyo maamulka Gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyn.
“Mudadii 3-cisho ee aan ku sugneyn Beledweyn waxaa qabanay howlo aad u tira badan, waxaan u nimid inaan u kuur galno xaaladaha nabadgelyada siyaasada... Tags: warar Amaanka suuqa ugu weyn Soomaaliya oo laga dooday
(Salaamanews)-Kulan looga hadlayay sidoo loo xoojin lahaa ammaanka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay degmadaasi.
Kulanka waxaa ka qeyb-galay madax ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, saraakiil ciidan, qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka iyo marti sharaf kale.
Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta kulanka ka qeyb-gashay ayaa xusay in ammaanka Howlwadaag uu wanaagsan... Tags: dhaqaalaha, warar Amaanka gobolka Bari oo laga walaacsanyahay
(Salaamanews)-Maamulka gobolka Bari ayaa sheegay inaan loo dulqaadan doonin khalkhal gelinta ammaanka gobolka.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Boosaaso, guddoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan ayaa cambaareeyay israsaaseyn xalay dhex martay ciidan ilaalo hayay iyo koox hubaysan oo aan haybtooda la garanayn.
Galan ayaa ku goodiyay inay gacan bir ah ku qaban doonaan cid... Tags: warar Soo Dhaweenta Faqi Bashir Abdulle Osman MPLS MN	Daawo muuqaallo kale	Maqaallo »